Nnwom 8 NA-TWI - Ɔbɔadeɛ ne abɔde anuonyam - O - Bible Gateway
Nnwom 7Nnwom 9
Nnwom 8 Nkwa Asem (NA-TWI)
8 O Awurade, yɛn Awurade, wo kɛseyɛ ada adi wiase mmaa nyinaa. Nkamfo a wɔkamfo wo no du soro. 2 Mmofra ne nkokoaa kamfo wo. Woasiesie wo ho ama w’atamfo nyinaa; wusiw obiara a otia wo no kwan.